Alexis Sanchez Oo Mushahar Xad Dhaaf Ah Ka Dalbaday Bayern Munich Si Uu U Dilo Xiisaha Kooxda Jarmalka & Sababta Ka Danbeysa Oo La Ogaaday - Laacib.net
Alexis Sanchez Oo Mushahar Xad Dhaaf Ah Ka Dalbaday Bayern Munich Si Uu U Dilo Xiisaha Kooxda Jarmalka & Sababta Ka Danbeysa Oo La Ogaaday
Alexis Sanchez ayaa ka dalbaday mushahar xad dhaaf ah kooxda Bayern Munich si uu ugu qasbo Arsenal inay heshiis la gaarto kooxda uu xiiseynayo ee Manchester City, sida ay qortay jariirada Sunday Mirror.
Sanchez ayaa u sheegay kooxda heysata horyaalka Bundesliga inuu doonayo sannadkii mushahar gaaraya 21.85 milyan ginni si uu ugu wareego Munich.
Waxaana ay taasi u dhigantaa mushahar gaaraya 420 kun ginni isbuucii, waxaana ay cabaqad ku tahay hab dhismeedka mushaharka kooxda Bayern Munich.
Madaxda kooxda Bayern Munich ayay amakaak ku noqotay lacagta loo sheegay si ay u helaan weeraryahanka 28 sanno jirka ah.
Waxaana magaalada Munich laga aaminsan yahay in Sanchez uu doonayo inuu ku biiro Manchester City, waxaana uu isku dayayaa inuu ku qasbo Arsenal inay heshiis la gaarto kooxda ay Premier League ka wada ciyaaraan.
Kooxda Gunners waxa ay ku dooneysaa Sanchez 50 milyan ginni, waxaana ay ku adkeysanayaan inay sii ceshan doonaan ilaa iyo sannadka ugu danbeeya qandaraaskiisa halkii ay ka iibin lahaayeen koox kula xafiiltameysa Premier League.
City ayaa Emirates kala soo wareegtay Samir Nasri, Emmanuel Adebayor, Gael Clichy, Kolo Toure iyo Bacary Sagna sannadihii u danbeeyay, waxaana ay sugayaan in Bayern Munich ay ka baxdo tartanka saxiixa Sanchez ka hor inta aysan iyagu u dhaqaaqin.
Waxa ay u noqon doontaa afganbi weyn kooxda City inay ku garaacdo kooxda Jarmalka saxiixa Sanchez.